Myanmar OA6: TP သင်္ကြန်နဲ့ ကျွန်တော့်အတွေးများ
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 9:45 AM
TP သင်္ကြန်ကတော့ အစ်ကိုတို့ ကျောင်းတက်ကတည်းက အမြဲတမ်း စည်စည်ကားကား သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းရှိခဲ့ကြတာ ထုံးစံပါပဲ။ ဒီအစဉ်အလာကို ၁၀ နှစ်တိုင်တိုင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ TP ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းသားဟောင်းတွေအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် :)
သြော် နင်က တီပီ ကြည့်ပြီး ပျော်နေတာကိုဟး)
ကျနော်လဲ အဲသည်ပွဲကိုလာကြည့်ဖြစ်တယ်။ ကိုပွတ်လိုဘဲ ခံစားရတယ်။ ဒါထက် ကိုပွတ်ကို မြင်လိုက်သလိုဘဲဗျ။ မဲတခု ပေါက်သွားတာ ကိုပွတ်မဟုတ်လား။
You never ring me when this kind of good staff are coming.
Is there any VCD for this event???
:) good point of view bro !:P
တီပီ သင်္ကြန် ကြည့်ချင်တယ်ဗျို့။ ဘယ်သူများ လက်စွမ်းပြပြီး ရိုက်လာတာ ၇ှိပါသလဲ။ :)